Seychelles ayaa lagu tijaabiyey Cuntada Cuntada ee Goût de France
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles ayaa lagu tijaabiyey Cuntada Cuntada ee Goût de France
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles oo lagu tijaabiyey Goût de France
Danjiraha Faransiiska ee Seychelles, Mudane Dominique Mas, ayaa ku casuumay bulshada Seychelles iyo booqdayaasha ku sugan Seychelles inay ku soo biiraan dabaaldegyada dhacdada caalamiga ah ee cunto karinta Goût de France/Good France oo la qaban doono Oktoobar 14 ilaa Oktoobar 22, 2021.
Dabbaaldegyada munaasabadda ayaa lagu dhisi doonaa guusha guulaha daabacaadyadii hore ee dhacdada Goût de France ee caalamka.
Sannadkan waxay soo bandhigi doontaa Gobolka Dooxada Center-Loire iyada oo la soo bandhigi doono fikradda gaas-nacaybka u habboon deegaanka.
Gout de France ayaa weli ah dhacdada ugu muhiimsan adduunka oo dhan ee cunnada Faransiiska waxayna u tahay abaalmarin dhammaan kuugga.
Casuumadda waxaa lagu soo gaadhsiiyay shir jaraa’id oo ka socda Hoyga Faransiiska ee La Misère iyadoo uu goob joog ka ahaa Agaasimaha Guud ee Suuqgeynta Meesha ee Dalxiiska Seychelles Waaxda, Marwo Bernadette Willemin. Cunto -kariyeyaasha oo matalaya qaar ka mid ah hay'adaha iskaashiga la leh daabacaadda Goût de France sannadkan ayaa iyaguna goob joog ka ahaa daah -furka munaasabadda.
Daahfurka munaasabadda, Mudane Dominique Mas wuxuu iftiimiyay in xafladaha lagu dhisi doono guushii daabacaadyadii hore ee dhacdada Goût de France ee adduunka oo dhan, taas oo sanadkaan lagu soo bandhigi doono Gobolka Dooxada Center-Loire halka lagu soo bandhigayo fikradda ah in la cuno saaxiibtinimada deegaanka. .
“Sannadihii adkaa ee ka dambeeyay markii xiriirkayagii bulsheed ay carqaladeeyeen dhibaatooyinka fayadhowrka iyo dhaqaalaha, waxaan ku faraxsanahay inaan si wadajir ah ugu dabbaaldegno dhaxalkayaga cunnada ee Faransiiska saaxiibbadeenna Seychelles iyo dhammaan martigaliyayaasha shisheeye ee jasiiradaha,” ayuu yiri Danjire Mas. Wuxuu raaciyay, “Gout de France ayaa weli ah dhacdada ugu muhiimsan adduunka oo dhan ee cunnada Faransiiska; laakiin sidoo kale waxay xushmad u tahay dhammaan kuugga iyo xubnaha bulshada soo -dhoweynta oo dhib badan soo gaadhay bilihii la soo dhaafay. ” Danjiraha ayaa isku xil saaray inuu booqdo dhammaan siddeeda maqaayadood iyo hoteellada isagoo soo jeedinaya liis summadaysan gudaha Seychelles. "Waan ogahay inay miisaankeyga u xun tahay, laakiin waxaan rabaa inaan ku biiro dhammaan dadka jecel Seychelles ee cuntada jecel oo aan kula dabaaldego dhaqanka Faransiiska iyo wax cusub oo caadi ah," ayuu yiri Danjiraha Faransiiska
Lovers of gastronomy fine agagaarka Seychelles waxay bilaabi doontaa daahfurka cunnada dooxada Center-Loire, taas oo hodan ku ah dhadhan laga helo wax soo saarka maxalliga ah, iyadoo la filayo dhadhanka farmaajo aad u fiican, khamri, iyo Tarte Tatin caanka ah, oo lagu sameeyay tufaax karamelized iyo hadda waa mid ka mid ah macmacaannada aadka loo aqoonsan yahay ee Faransiiska, kaas oo ka yimid gobolka u dhow Sologne 1880naadkii.
Marwo Willemin ayaa soo dhoweysay dib -u -bilaabashada Goût de France iyadoo sheegtay in dhacdooyinka noocan oo kale ah dib loogu celiyo kalandarka Seychelles ay soo celinayso kalsoonidii waddanka ee dib -u -soo -kabashada warshadeenna dalxiiska.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan taageerno safaaradda Faransiiska oo aan ku biirno xafladaha Goût de France ee sannadkan. Kadib hal sano oo hubanti la’aan ah, dhacdooyinka sida Gout de France waxay u keenaan iftiin mustaqbalka warshadeena. Gastronomy, gaar ahaan cunnooyinka wanaagsan, waa farxad la wadaago hubaalna waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daahfurka iyo waayo -aragnimada meel loo socdo, ”ayay tiri Marwo Willemin.
Shirka jaraa'id ka dib, martida iyo xubnaha saxaafaddu waxay muunad ka soo qaateen noocyo kala duwan oo macmacaan ah oo lagu bixin doono qaar ka mid ah maqaayadaha oo qayb ka ah dhacdada Seychelles.
Goût de France/Good France waxaa la xusaa 20 -ka Maarso sanad walba. Si gaar ah sanadkan, munaasabadda waxaa la qaban doonaa Oktoobar. Makhaayadaha iyo hoteellada soo socda ayaa soo jeedin doona menusyo go'an oo gaar ah laga bilaabo Oktoobar 14 illaa Oktoobar 22, 2021: Club Med Ste Anne, Constance Ephelia, Constance Lemuria, Delplace, l'Escale, Hilton Northolme, Maia iyo Mango House.